musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Passenger Nhamba Dzinoramba Dzichikwira kuFrankfurt Airport
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Traffic munzvimbo dzese dzenhandare dzeFraport Group dzakawedzera zvakanyanya, uye gore-gore-gore manhamba achikwira nemazana mazana ezana - kunyangwe zvichibva padanho rakadzikira kwazvo remotokari muna Chikunguru 2020.
Fraport yakanaka maitiro anoenderera mberi.
FRA yakagamuchira vamwe vangasvika mamirioni 2.85 muna Chikunguru wa2021.
Kuenzaniswa naJuly 2020, nhamba dzevakwiri dzinokwira zvakaenzana nekuwedzera kwe115.8 muzana.
Cargo inopfuura paFrankfurt Airport inoona kuwedzera kukura kwakasimba, nhandare dzeFraport Group pasirese zvakare dzinochengetedza kumusoro kwetsika
Nhamba dzevapfuuri pa Nhandare yeFrankfurt (FRA) yakaramba ichikwira muna Chikunguru 2021. FRA yakagamuchira vamwe vangasvika mamirioni 2.85 mumwedzi wekuburitsa, zvichimiririra mwero wepamusoro wevatakuri kubva pakatanga denda reCovid-19. Kuenzaniswa naJuly 2020, izvi zvakaenzana nekuwedzera kwe115.8 muzana. Nekudaro, chiyero ichi chakavakirwa pane yakaderera bhenji bhenji yakanyorwa muna Chikunguru 2020, apo traffic yaive pasi pakati pekukwira kwecoronavirus hutachiona hwehuwandu.
Mumwedzi wekuburitsa, yakaderera COVID-19 zviitiko zvezviitiko uye huwandu hwekuwedzera hwejekiseni hwaive nemhedzisiro pane kudiwa - kunyanya kwenzvimbo dzekugara zororo. Pane mamwe mazuva epamusoro, huwandu hwevatakuri muFrankfurt hwasvika pa60 muzana yeiyo pre-denda nhanho. Zuva rakabatikana zvikuru mumwedzi wekuburitsa raive Chikunguru 31, apo vamwe vafambi zviuru gumi nezviviri vakafamba vachipfuura nendege yeFrankfurt - nhamba yepamusoro-soro yevatakuri vakanyorwa pazuva rimwe kubva pakatanga denda iri.
Kuenzaniswa naJuly 2019, vafambi vemigwagwa kuRA vachiri kunyoresa kuderera kwe58.9 muzana yemwedzi wekuzivisa. Munguva yaNdira-kusvika-Chikunguru 2021 nguva, Frankfurt Airport yakagashira vamwe vanosvika mamirioni 9.3. Zvichienzaniswa nenguva imwechete yemwedzi minomwe muna 2020 uye 2019, izvi zvinomiririra kuderera kwe30.8 muzana uye 77.0 muzana zvichiteerana.
Cargo traffic muFrankfurt yakaenderera mberi nekukura, kunyangwe kushomeka kuri kuita kwedumbu kunopihwa nendege dzevapfuuri. Muna Chikunguru 2021, mutero weFRA wekutakura (unosanganisira kutakura nendege uye nendege) wakakwakuka ne30.0 muzana pagore-gore-kusvika kumatoni emamiriyoni 196,223. Kuenzaniswa naJuly 2019, nhumbi dzakakwira 9.8 muzana. Kufamba kwendege kwakakwira ne79.5 muzana gore-ne-gore kusvika 27,591 kutora uye kumhara. Yakaunganidzwa yakakwira kurema kurema kurema (MTOWs) yakakwira ne68.5 muzana kusvika pasi pe1.7 mamirioni ematani muna Chikunguru 2021.